आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा के खोल्न मिल्छ , के खोल्न मिल्दैन ? – Namaste Dainik
आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा के खोल्न मिल्छ , के खोल्न मिल्दैन ?
September 2, 2020 September 2, 2020 NamastedainikLeaveaComment on आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा के खोल्न मिल्छ , के खोल्न मिल्दैन ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जारी नि’षेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइ एकसाता थप गरिएको छ। नि’षेधाज्ञा अघिल्ला हप्ताहरुमा भन्दा परिमार्जनसहित एक साता थपिएको हो। बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह मन्त्रालयको परामर्शपछि जा’री नि’षेधाज्ञा केही परिमार्जनसहित भदौ २४ गतेसम्मका लागि थपेका हुन्। दुई हप्तादेखिको नि’षेधाज्ञापछि आममानिसहरूले अवज्ञा गर्ने क्रमसमेत शुरू भएपछि प्रशासनले केही सहज बनाउँदै निषेधाज्ञा थपेको हो।
जनप्रतिनिधिले थप कडाइ गर्न र उद्योगी व्यवसायीले खुल्ला गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन द’बाब दिइरहेका बेला केही खुकुलो गरेर फेरि नि’षेधाज्ञा बढाइएको हो। अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतको औ’षधि पसल तथा विक्री वितरणलाई यथावत रूपमै सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। यस्तै अत्यावश्यक खाद्य वस्तु सेवाहरू तरकारी, फलफुल, माछामासु, दुध, दूधजन्य पदार्थ बिहान ११ बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ। यसअघि यस्ता पसलहरू बिहान ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइएको थियो ।नि’षेधाज्ञाको समयमा यसअघि प्र’तिबन्ध लगाइएको टे’क अवे र उपभोग्य वस्तुको होम डेलिभरी सेवा भने खुला गरिएको छ।
होम डेलिभरी सेवाको मा’पदण्ड भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छिट्टै जारी गर्नेछन्। होम डेलिभरी र टेक अवे सेवा दिने व्यक्तिको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्नेछ र उनीहरुले भेटेका व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्नुपर्नेछ। हवाई उडानबाट विदेश जानेहरुले पासपोर्ट, भिसा, स्वीकृत हवाई टिकट हुनेहरु सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनलाई पनि चल्न दिनेछ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि भदौ ३ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा एक हप्ताको लागि नि’षेधाज्ञा लगाइएको थियो।
अब व्यापारी र ठेकेदारले चुनाव भिड्न नपाउने, निर्वाचन खर्च राज्यले नै बाड्ने
कोरोना परीक्षणमा केन्द्रीय प्रयोगशालाकै ब’दमासी, परीक्षण नै नगरी डेढ सयको रिपोर्ट
पिसिआर टेष्ट रिपोर्ट नदेखाए प्रवेश निषेध
नियमित उड़ानको भाडादार चार्टर्डको भन्दा मँहगो